We.com.mm - Instagram မှာ Follower များအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Facebook မှာ like တွေ Follower တွေများနေတာက မဆန်းတော့ပါဘူး။ Facebook မှာတင်မကပဲ တခြား Social Media တစ်ခုမှာလည်း သင့်အနေနဲ့ Social Star ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့နေရာကတော့ Instagram ပါ။ Celeတွေတော်တော်များများကလည်း သူတို့ရဲ့ Personal Photoတွေကို Facebookမှာသိပ်မတင်တော့ဘဲ Instagram မှာ ပဲတင်ကြပါတော့တယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ Instagram မှာက ပုံအောက် comment ရေးလိုပဲရပြီး ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြား user တွေရဲ့wall အပေါ်ရှဲလ်ယူသွားလို့မရတဲ့ အတွက် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် screen shoot ရန်တော့ ရှိနိုင်သေးတာပေါ့နော်။
သင့်အနေနဲ့သည် အချက်လေးတွေ ကိုလိုက်နာပြီး သင်ကိုယ်တိုင်လည်း Social Media မှာလူသိများကျော်ကြားသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ Instagram မှာ Follow တွေLlike တွေလိုချင်တဲ့ ကိုကိုတွေမမတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးကတော့
ည၇နာရီမှာ သင့် Photo တွေတင်မယ်ဆိုရင် နောက်နေ့တွေမှာလည်း ည၇နာရီတင်ရမယ်ကိုပြောချင်တာပါ။ ဒါမှ lnstagramသုံးတဲ့သူတွေက သူကဒီအချိန်ဆို ပုံအမြဲတင်ပါလားဆိုပြီး သတိပြုမိမှာပါ။ နောက်တစ်ခုက သင့်အနေနဲ့ချင့်ချိန်ပြီး ယုံသင့်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ညနေငါးနာရီပုံတင်တာက Like နဲ့ Follower ကို အရင်ကထက်ပိုများစေတယ်ဆိုပဲ။စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
၂. ပုံတင်တိုင်း Caption လေးတွေပါ ပါစေ
သင်ပုံတင်မယ်ဆိုရင် caption လေးပါမှလူတွေကစိတ်ဝင်စားစေမှာပါ။ Caption ကိုလည်းအခြားသူတွေရေးနေကျ Caption မျိုးမဟုတ်ဘဲ သူတို့ရေးနေတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ Captionလေးကိုရေးသင့်ပါတယ်။
(ဥပမာ - တနင်္ဂနွေ နေ့ရောက်ရင် အချို့တွေ ရေးနေကြပုံစံက SuperSunday ဘယ်သွားတယ် ညာသွားတယ်လို့ရေးနေတဲ့ပုံစံမှာ ကိုယ်ကသူတို့မတူတဲ့ ပုံစံ လေးတွေရေးပေးပါ) ။ နည်းနည်း ဟော့တယ်
လို့ထင်တဲ့ပုံ ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ Caption လေးတွေနဲ့ တွဲတင်တာမျိုးကလည်း တစ်ကယ်အကျိုးရှိစေမယ့်အချက် တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃. နာမည်ကြီးရေပန်းစားတဲ့ hashtag လေးတွေထည့်ပေးပါ
Caption ရေးတဲ့အခါမှာ စာသားကြီးဘဲ မထည့်ဘဲ Sticker လေးတွေကို စာသားတွေနဲ့ညှပ်ပြီး ထည့်ပေးပါ။ Sticker ကိုတော့တော်တော်များများက Caption ရေးတိုင်းထည့်သုံးကြပါတယ်။ ဒါတွေကအခုဆို ခေတ်တုန်းနေပါပြီ။ အခုသင်ဟာ Sticker နေရာမှာ Hashtagလို့်ခေါ်တဲ့(@;#;*;$;¿;`´;<>;) စတဲ့သင်္ကေလေးတွေကိုထည့်ပြီးသုံးကြည့်ပါ။ အလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကအရင်စသုံးမိတဲ့အတွက် အခြားသူတွေကလည်း သင်သုံးသလိုမျိုး သုံးမိကြမှာပါ။
၄. Photo အလန်းအဆန်းလေးတွေကိုရိုက်ပါ။
အခုပုံတွေဆိုရင် တော်တော်များက သည်လို ပုံမျိုးတွေကို လိုက်ပါတုပရိုက်ကူးပြီး သူတို့
လို Social Media တွေမှာ တင်နေပြီးသား ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ။ သင်သာ အခုနေအဲ့လို Photo လိုမျိုး ရိုက်မယ်ပါက ခေတ်နောက်နေပါပြီ။ ဘာကြောင့်များ ကိုယ်က သူများနောက် ကိုလိုက်မလဲလေ နော် ။ သင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကပဲ သူများတွေလိုက်ပါ တုပချင်လာအောင် စိတ်ဝင်တစားဖြစ်သင့်တယ် မဟုတ်ပေဘူးလား ။ သင်ရိုက်လိုက်တဲ့ photo ဟာ လူအားလုံး လိုက်ပါတုပပြီး ရိုက်ကူးရတဲ့ Social Media Trend တစ်ခု မဖြစ်လာဘူးလို့ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူးလေနော်။
ပုံရိုက်ပြီးရင် သင့်ရဲ့ပုံလေးတွေကို မသိမသာအောင် Effect လှလှလေးတွေသုံးပြီးတင်ပါ။ ပြီးရင်သင်သုံးတဲ့ Effectလေးတွေ Photo Edit လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်လေးတွေပါ ဖော်ပြပေးရင်း ပုံပြုပြင်ဖို့စိတ်ဝင်စားသူ Follower တွေ သင့်ဆီထပ်တိုးလာနိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် သင့်ကိုယ်ပိုင်လျှို့ ဝှက် ပုံပြင်နည်းလေးတွေကတော့ ချွင်းချက်အနေနဲ့ချန်ထားပေါ့နော် ။
၆. ဒီနည်းက သုံးချင်လည်းသုံးပါ။ အန္တရာယ်တော့များပါတယ်
Appအချို့သုံးရမှာ ဥပမာ Like ခိုးတာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ မလုပ်တက်ပဲသုံးမိရင်တော့ သင့် account ကိုပျက်စေမှာပါ။ မသုံးတာကတော့အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ တစ်ကယ်လိုသုံးခဲ့ရင်လည်း စိတ်ချလုံခြုံ ဘေးကင်းဖိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်လည်း အခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ photo ၊ caption တွေ၊ ပုံပြုပြင်နည်းအသစ်အဆန်းတွေ သုံးပြီး lnstagram မှာ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်လိုက်ပါနော်။